Sinusitis ezinganeni, izimpawu kanye nokwelashwa kwazo namuhla sinesithakazelo endabeni ingxoxo yethu, - omunye walabo izifo esikhohlisayo ezenzeka emasontweni okuqala cishe khona izimpawu, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kubangele sengozini yokuthola izifo. Esikhathini izimo ezingezinhle kakhulu lokhu kungase kube meningitis, ukuvuvukala meninges kobudala fibre orbit, periostitis maxillary osteoperiostity enethiwekhi futhi t. D. Ukuqala ukuvela nokuthuthukiswa sinusitis kungaba ezihlukahlukene nezilwanyana ezincane (isikhunta namagciwane), njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, ayanda adenoids futhi acinene septum ukusonteka.
Sezizathu ezenza kukhona sinusitis ezinganeni, izimpawu kanye nokwelashwa isifo cishe ezizimele. Izimpawu ezibonisa kubazali ukuthi ingane kufanele siboniswe uchwepheshe, ezimweni eziningi izingxenye. Ziyakwazi:
abandayo isikhathi eside, ephelezelwa ubovu noma ocucuzayo lwamanzi kusukela ekhaleni;
umuzwa ukoma emlonyeni;
ukukhwehlela ekuseni (kukhona ngenxa yokuthi ukuthi namadreni isikhwehlela ngobusuku nasopharynx);
ubuhlungu avuvukele acinene itheku (zinganikwa ku cheekbones, izihlathi, amehlo ngisho namazinyo);
amehlo ombozwe ububomvu samehlo, kwezinye izimo, conjunctivitis;
Ngakho-ke kubonakala sinusitis ezinganeni, izimpawu kanye nokwelashwa okuyinto izincwadi esizifundayo manje. Ngakho, ngibona lezi izimpawu yengane yakhe, amthathe ngokushesha reception uLaura, ngubani uyokhulula i ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe futhi akutshele ukuthi yini okufanele uyenze ngokulandelayo.
Ukwelashwa sinusitis kwezinsana
Lapho ekhetha indlela efanelekayo ekwelapheni udokotela uyakucabangela izinto eziningi. Phakathi kwabo - imbangela sifo futhi ubude bayo, yisishiso komqondo nezinga lokukhula kwengane, isimo jikelele umntwana, khona izifo concomitant nokuphazamiseka.
A imfuneko kwelashwa embhedeni ukuphumula. Ezimweni eziphambili kungadinga esibhedlela. Uma isigebengu - ukutheleleka, yamisa Yiqiniso kwama-antibiotic. I imithi eminye esebenza ngempumelelo kakhulu ngesikhathi esifanayo ezibhekwa "Cefazolin" "penicillin", "Biseptol" futhi "Ampicillin". Ngaphezu linqume yokuvula amakhala (imithi "Galazolin," "UDkt Tice Nazolin", "Nazivin", "Nazol", "Farmazolin" et al.). Kuye ngokuthi yiziphi ezihambisana izimpawu sinusitis, ukwelapha lesi sifo ezinganeni kungadinga ukusetshenziswa eqeda ukuvuvukala, analgesic nezidakamizwa antipyretic.
Ukuze ukusheshisa le nqubo zokuphulukisa, odokotela abaningi ukukhetha amanye amaqhinga kanye emuva kokulandela izinqubo ezinqunywe olukhulu (wokubhoboza classical lapho inaliti ngemithi busuka ndima acinene noma "cuckoo", okusho egeza ethile kusho amavesi acinene).
Ngo yokutakula esiteji ikhombisa ukusetshenziswa amakhambi ahlukahlukene herbal, kanye ubambe Physiotherapy (acupressure electrophoresis, laser kanye reflexology futhi t. D.).
Zikhona amathiphu ambalwa abantu mayelana nendlela ukwelapha sinusitis ezinganeni. Ngokwesibonelo, kuyasiza ukuba baphuze izingxenye ezincane raspberry efudumele, currant, guelder rose nolwandle lalesi sihlahla izithelo iziphuzo. Ezinye aluleka ukuba abantwana bakho basebenzise ukuphefumula intuthu garlic kuba isihloko sesiqu, njengoba kuzosiza kahle kakhulu, futhi ibhoboze ekhaleni lakhe isikhathi eside. Kuyasiza bangcwabe sihlahla samajikijolo futhi Inja rose uwoyela, juice noma umhluzi beet noma izaqathe. Ukuze ungangihluphi kakhulu okumelwe uphefumule futhi ukhulume ukunciphisa ukuvuvukala, kungaba kancane ukuhlafuna lezinyosi. Nesweli, onion, horseradish Aloe ngokuvamile iyithuluzi elibalulekile ekulweni nale nkinga.
Manje uyazi ulwazi oluyisisekelo mayelana sinusitis ezinganeni, izimpawu kanye nokwelashwa yalesi sifo, futhi uzokwazi ukuqaphela wenkinga bese ngilungisa wona ngisho ngezigaba zayo zokuqala. Hlala uphilile!
Jumpsuit Baby Go Winter: isici, izibuyekezo zamakhasimende
Ubhaka aphethe izingane - induduzo ingane nomama